माइला लामाको गिरफ्तारी बिरुद्द विप्लबको बन्द [विज्ञप्तिसहित] – Rapti Khabar
साउन ११, काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् उपत्यका ब्युरो ईन्चार्ज माईला लामा पक्राउको बिरोधमा उक्त पार्टीले बन्दको आवह्वान गरेको छ ।
नेकपाले यहीँ साउन १५ गते बाग्मति, नारायणी ब्युरो सहित जनकपुर ब्युरो अन्तर्गतका जिल्लामा बन्दको आवह्वान गरेको जनाएको छ । विद्रोही नेकपाले लामासहित सम्पुर्ण नेता कार्यकर्ताको विना सर्त रिहाईको माग गरेको छ ।
विप्लव नेकपाको विज्ञप्तिअनुसार बन्द हुने जिल्लामा बागमती अञ्चलका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक रहेका छन् ।
त्यस्तै नारायनी ब्यूरोका रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन पनि नेकपाको बन्दमा परेका छन् । उता जनकपुरका रामेछाप र दोलखामा पनि नेकपाले बन्दको आह्वान गरेको छ ।
साउन ४ गते राती सुतिरहेको समयमा काठमाडौं काँडाघारीबाट माइला लामालाई राष्ट्रघाती, व्यभीचारी, लुटेरो, दलाल, हत्यारो, गुण्डा नायक प्रहरीभित्रको बदनाम गिरोहले गिरफ्तार गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ओली–बादल मण्डलीको यसप्रकारको इतिहासकै तानाशाहहरुको हर्कत माथ गर्ने निरंकुश र आततायी गिरफ्तारी एवं दमनको पार्टी निन्दा र घोर भत्र्सना गर्दछ र माइला लामाको रिहाइको माग गर्दछ ।’
२०६२/०६३ सालमा भएको शान्ति वार्ताको नाममा प्रचण्ड–बाबुरामको बेइमानी गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध आफ्नो पार्टीले लगातार संघर्ष गर्दै आएको प्रकाण्डले बताएका छन् । सरकारले आफ्नो पार्टीमाथी प्रतिबन्ध लगाएर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नाङ्गिएको र संकटमा परेको प्रकाण्डले बताएका छन् ।
जनकलाकार एवं उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज लामालाई यहि साउन ४ गते काँडाघारीस्थित एउटा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले मध्यराति घेरा हालेर पक्राउ गरेको थियो । एनसेलमा बम बिष्फोट लगायतका मुद्धामा लामा नख्खु कारागार चलान भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लामा पक्राउको सत्तारुढ नेकपाकै नेता कार्यकर्ता एवं संस्कृतिकर्मीले विरोध गरिरहेका छन् । उनको रिहाई हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
विद्रोही नेकपाका महासचिव विप्लवले स्थायी समिति सदस्य हेमन्त पक्राश ओली ‘सुर्दशन’ केन्द्रीय सदस्य माइला लामा सहितका नेताको विना सर्त रिहाइको माग गरेका छन् ।
मेरो रगत बग्यो भने यही पवित्र माटोमा मिलोस् शरीर ढल्यो भने प्रिय सहिद—सपूतहरूसँगै सुतोस् ! नलागोस् खोट, आदर्श बाँचिरहोस् खपेर सारा चोट सपना चम्किरहोस् ! यी माथिका हरफहरु वर्तमान परिस्थितिमा आफ्नो प्रतिबन्धित जिबनबारे ने.क.पा.का महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लब’ले दिएको अभिव्यक्ति हो । खबर हवका लागि जीवराम भण्डारीले महासचिब विप्लबसंग अन्तर्वार्ताका क्रममा अन्तिममा सोधेका छन, […]